Maxay Tahay Sababta Dawladda Federaalku u magacaabi weydey guddigii farsamo ee lagu heshiiyey? - Horseed Media
Maxay Tahay Sababta Dawladda Federaalku u magacaabi weydey guddigii farsamo ee lagu heshiiyey?
Dalka Soomaaliya u baaha shirar aan wax micna ah ku fadhinin.
Shir badbaado qaran waa mid u jeedo badan ah,Baarlamaanka ayaa ah hay’ada ugo mudan ee talo ka gaari karta doorashooyiny Soomaaliya waa haddii la rabo in sharci iyo dastuurka ka raaco.
Maamul goboleedyada waxa u furan wada tashi iyo in qayta dastuurko siiyey sysan dhaafin.
Xisbiyado ololahooda iyo barnaanijja siyaasadeed ha wateen.haba u daaayaan baarlamaanka in uu hiwshiisa guti.
Shir badbaado qaran waxay furi santuuq xiran wax faa’iida ahna kama soo baxayaan,waxa laga soo bartay sooyaalkii la soo maray.
Soomaaliya guul ,midnimo iyo nabad.
Abdikkarim isse says
Aniga waxay ila tahay, in marka hore laga war sugo Farmaajo iyo xukuumada cusub oo uu soo dhisayo.
Haddii waqtiga loo balansan yahey shirka Dhusamareeb ka hor xukuumad la helo, iyaduna xubnihii guddiga farsamo soo magacowdo, qorshuhuna sidii lagu balamey ku socdo, markaas waa sidii la rabey horey baa loo soconayaa.
Haddii xukuumadu dhisideedu waqti qaadato ama marka la soo dhiso, ay la timaado qorshe cusub oo ka duwan kii loo balansanaa.
Markaas dowlad goboleedyada waxaa u furan in ay iclimiyaan shirweyne badbaado qaran.